ज्योती मगरले देखाएको ‘ बु’बको च’र्चा , भन्छिन् ‘म से'क्सी हुँदा तपाईंलाई के स’म'स्या ? - Nawalpur Dainik
ज्योती मगरले देखाएको ‘ बु’बको च’र्चा , भन्छिन् ‘म से’क्सी हुँदा तपाईंलाई के स’म’स्या ?
January 25, 2021 by Nawalpur Dainik
गायिका ज्योति मगरले फेसबूकमा आइतवार एउटा तस्वीर शेयर गरिन् ।
बो ल्ड तस्वीरहरू सार्वजनिक गर्नु त उनका लागि सामान्य नै हो । तर, आइतवार तस्वीरसँगै उनले लेखेको ‘क्या’प्सन’ले सबैको ध्यान तानेको छ ।
एक कार्यक्रमका लागि नेपालगञ्ज उड्नुअघि उनले लेखेकी छन्–
‘म से क्सी हुन रोक्न सक्दिनँ । यो मेरो रगतमा छ । यदि यसलाई तपाईंले सहजै लिन सक्नुहुन्न भने यो तपाईंको स मस्या हो । मलाई बाल मतलब !’
सांगीतिक कार्यक्रमका लागि मगर आइतवार नै नेपालगञ्ज उडेकी छन् ।
हेर्नुहोस्, स्टाटस :
प्रायः क्लि भेज देखाएका कारण चर्चा र विवादमा आउने गायिका, मोडल ज्योती मगर यस पटक भने ‘अ न्डर बु’ब’ तस्बिरका कारण चर्चामा आइन्।उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो तस्बिर राखेर से क्सी हुनुबारेको चर्चा मात्र गरेकी छैनन्, अंग्रेजीमा अ श्ली ल शव्दको पनि प्रयोग गरेकी छन्।
उनका फेसबुकका फ्यान र साथीहरूले आलोचना र समर्थन गरेका छन्। उनले लेखिन्,‘म से क्सी हुन रोक्न सक्दिनँ । यो मेरो रगतमा छ । यदि यसलाई तपाईले सहजै लिन सक्नु हुन्न भने यो तपाईको स मस्या हो ।’यो तस्बिरमा प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा लेखनमा पनि सक्रिय रहेकाले भनेका छन्,‘नो प्रोब्लम माई डि यर, इट्स ओके।’
एक जना समर्थक पनि ज्योतीको प्रशंशका गर्दै लेखेका छन्,‘सही हो दिदि सही तपाईको अधिनमा रहेको हरेक कुरा तपाइकै हो। मर्जी हो जे गर्नुस् थोरै देखाउनुस, धेरै देखाउनुस् हामी त तपाइको गायकी र कलाकारिताको फ्यान हो। कतिपयले भने आलोचना पनि गरेका छन् ।
Posted in जीवनशैली, फोटो फिचर
Prevमाघ १३ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
Nextअध्ययन भन्छ, यी कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिन्छन् महिला